‘लगानीकर्तालाई निराश हुन नदिनु नै हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो’ | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
‘लगानीकर्तालाई निराश हुन नदिनु नै हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो’
भदौ २, २०७७ मंगलबार १०:९:१८ | उज्यालो सहकर्मी
काठमाण्डाै – रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले भदौ ४ गतेदेखि आईपीओ जारी गर्दैछ । रिलायन्सले ६३ लाख कित्ता शेयर जारी गर्न लागेकोमा तीन लाख १५ हजार कित्ता सामुहिक लगानी कोषलाई, तीन लाख १५ हजार कित्ता कम्पनीका कर्मचारीलाई र ५६ लाख ७० हजार कित्ता सर्वसाधारणको लागि रहेको रिलायन्स इन्स्योरेन्सले जनाएको छ ।
आईपीओका लागि आवेदन दिनेहरुले न्यूनतम १० र अधिकतम ६३ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन । आईपीओका लागि फारम लिने तथा बुझाउनका लागि सिआस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तोकिएका शाखा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ । रिलायन्सले आईपीओका लागि सानिमा क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ । स्थापनाको छोटो समयमै ठूलो उपलब्धी हासिल गरेको कम्पनीको दावी छ । कम्पनीले जारी गर्न लागेको आईपीओ र अन्य विषयमा उज्यालो अनलाइनले रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविणरमण पराजुलीसँग गरेको कुराकानी :
रिलायन्स इन्स्योरेन्सको आईपीओ भदौ ४ गतेदेखि जारी हुँदैछ, किन जारी गर्दैहुनुहुन्छ ?
हामीले संस्था स्थापनाको बेलामा नियामक निकायबाट स्वीकृत लिँदा चुक्ता पूँजी न्यूनतम दुई अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने सर्त पाएका थियौं । यो सर्त पूरा गर्ने भएपछि मात्रै हामीले लाइसेन्स पाएर संस्थाको कारोबार सुरु गरेका हौं । पहिलो कुरा त नीतिगत रुपमा पनि हामीले शेयर जारी गर्नैपर्ने थियो । अर्को कुरा हाम्रो कम्पनी शेयर निष्कासनको लागि सहज अवस्थामा पुगेपछि आइपीओ जारी गरेका हौं । आईपीओ जारी गर्दा कम्पनी र लगानीकर्तालाई पक्कै राम्रो हुन्छ, कम्पनी थप बलियो हुन्छ भन्ने भएर नै हामीले निर्णय गरेका हौं ।
कसरी र कहाँबाट भर्ने आईपीओ ?
भदौ ४ गतेदेखि खुल्ने शेयर छिटोमा भदौ ८ गते बन्द हुनेछ भने ढिलोमा भदौ २२ गतेसम्म खुल्नेछ । लगानी गर्न चाहनेले सि आस्वाको माध्यमबाट शेयर भर्न सक्नुहुनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको खातालाई सि आस्वासँग जोड्नुभएको छ भने निकै सजिलो तरिकाले भर्न सकिन्छ । यस्तै मेरो शेयरमामा डिम्याट खाता लिंक गरेर पनि शेयर आवेदन भर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय अरु आईपीओ भर्दा जुन प्रक्रियामार्फत आवेदन दिनुभएको छ, हाम्रोमा पनि त्यै प्रक्रिया नै हो ।
धेरैजना शेयरबजारमा आकर्षित हुन थालेका छन्, तर अझै पनि शेयरबजारमा लगानी गर्दाको फाइदाबारे अन्योलमा रहेको पनि देखिन्छ । शेयरमा लगानी गर्दाका फाइदा कसरी बुझाउने ?
शेयरमा लगानी गर्नु भनेको सम्पत्तिको उत्तम व्यवस्थापन हो । केही केही अवस्थामा बाहेक सम्पत्तिको उत्तम व्यवस्थापनले घाटा गर्दैन फाइदा नै हुन्छ । उदाहरणको लागि रिलायन्सको आईपीओ एक सय रुपैयाँमा भर्दा त्यसले भोलि ठूलो प्रतिफल दिन सक्छ । शेयरमा लगानी गर्नु भनेको पनि सम्पत्तिको वृद्धि गर्नु हो ।
रिलायन्सका शेयरधनीले एक सय रुपैयाँमा एक कित्ता शेयर किन्नुहुन्छ, भोलि कम्पनीको कारोबार बढ्दै जाला, तपाइँले लगानी गरेको रकम र पाइने प्रतिफलबीचको सम्पत्तिलाई फेरि अर्को ठाउँमा पनि लगानी गर्न सकिन्छ । त्यसैले शेयरमा लगानी गर्दा यसका बहुआयामिक फाइदा छन् । अर्को कुरा रिलायन्स इन्स्योरेन्सले थप प्रगती गर्दै गयो भने आखिर त्यसको अंश शेयर लगानीकर्तामा पनि पुग्ने हो ।
आफूसँग भएको रकम यत्तिकै राख्नु भन्दा शेयरमा लगानी गर्नु उत्तम हो भन्नु खोज्नुभएको ?
हो तपाइँ हामीसँग भएको सम्पत्ती/रकम यत्तिकै राखिरहने हो भने पैसाको मूल्य घट्दै जान्छ । सम्पत्तीलाई पनि लगानीको माध्यमबाट खेलाउन सकियो भने पैसाले पैसा तान्छ , महत्व झनै बढ्छ । अहिले हामीले सम्पत्तिको केही भाग शेयर लगानीका छुट्यायौं भने पनि त्यसले केही समयमै राम्रो प्रतिफल दिन पनि सक्छ ।
नागरिकले जुन संस्थाको शेयरमा लगानी गर्छन, त्यो संस्थाको वित्तीय अवस्था त पक्कै हेर्छन्, तपाइँहरुको कम्पनीको वित्तीय अवस्था के कस्तो छ ?
हामी अहिले स्थापनाको ३२ औं महिनामा प्रवेश गरेका छौं । यो समयमा हामीले बीमा समूहको सफलताको लागि हेरिने २/४ वटा सूचकमा आफूलाई अब्बल बनाइसकेका छौं । प्रिमियम संकलनलाई निकै महत्वका साथ हेरिन्छ, यसमा हामीले निकै राम्रो फड्को मारेका छौं ।
स्थापना वर्षको पहिलो आठ महिनामा हामीले आठ करोड रुपैयाँ संकलन गरेका थियौं । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ हामीले ७६ करोडको हाराहारीमा प्रिमियम उठायौं । गएको आर्थिक वर्षमा हामीले एक अर्व ४२ करोड रुपैयाँ संकलन गरेका छौं । यो बृद्धिदरलाई निकै उत्साहपूर्ण मानिन्छ । जीवन बीमाको सन्दर्भमा लाइफ फन्डलाई पनि महत्वका साथ हेरिन्छ । यो पनि चार करोड रुपैयाँबाट सुरु भएर, २०७५/७६ मा ४१ करोड र गएको आर्थिक वर्षमा एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ ।
खुद नाफाको सन्दर्भमा पनि हाम्रो निकै राम्रो प्रगती छ । सुरुको वर्षमा हामी झण्डै नौ करोड रुपैयाँ नाफामा थियौं । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा हाम्रा शाखा विस्तार, व्यापार बृद्धिको लागि गरिएका क्रियाकलापले गर्दा हाम्रो नाफा दुई करोड २६ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । गएको वर्षमा हामी लगभग चार करोड १३ लाख रुपैयाँ नाफाको आधार सृजना भइसकेको छ । यसरी हेर्दा हामीले स्थिर बृद्धि र महत्वपूर्ण प्रतिफलमा अगाडि जाने अवस्थामा प्रवेश गरिसकेका छौं ।
लगानीकर्ताले जे आधार हेरेर लगानी गर्न खोज्छन्, त्यो आधार तपाइँहरुसँग छ ?
यो नयाँ संस्था हो, यसलाई सुधारोन्मुख बाटोमै लगिरहेका छौं । हाम्रा हरेक तथ्यांकले देखाइरहेका छन् कि हामीले राम्रो मार्गमा हिँड्ने प्रशस्तै आधार बनाइसकेका छौं । लगानीकर्ताले जे हेरेर लगानी गर्नुहुन्छ, ती कुरा हाम्रो कम्पनीमा पक्कै पनि छन् । लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन सक्ने अवस्थामा रिलायन्स इन्स्योरेन्स कम्पनी पुगेको छ ।
बीमा समूहको शेयर कारोबार र बृद्धिमा निकै हलचल हुने गरेको छ, यो विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
यो सामान्य कुरा नै हो । कुनै पनि कम्पनीको शेयर एकैपटक धेरै बढ्छ भने एकैपटक धेरै घट्नुलाई अनौठो मान्नु हुँदैन । माग र आपूर्तिको सिद्धान्तले शेयर बजारमा पनि काम गरेको हुन्छ । कहिले नाफा र कहिले घाटा सामान्य विषय हो । तर घाटातर्फ मात्रै जान थाल्यो भने हामीले सोच्नैपर्छ ।
मैले रिलायन्सको कुरा गर्दा रिलायन्सले अरु १९ वटा संस्थालाई भन्दा कसरी आफूलाई भिन्न रुपमा राख्न सक्छ भन्ने कुराले पनि यसको हलचलमा भूमिका खेल्छ । नाफाका हिसाबले रिलायन्स सधैं नाफामा मात्रै रहला भन्न सकिन्न । तर संस्थागत सुशासन, यसका पोलिसी, दिने सेवा, हाम्रा प्रडक्टमा अरु भन्दा भिन्न हुन सक्छौं । संस्थाका यी तमाम सकारात्मक पक्ष हेर्दा हाम्रो शेयरमा ठूलो हलचल नआएर सामान्य हिसाबको बृद्धि हुँदै जान सक्छ ।
आईपीओको प्रसंगपछि अब हामी जीवन बीमाका अन्य पक्षको कुरा गरौं, जीवन बीमामा नागरिकको आकर्षण कस्तो छ ?
पछिल्लो समय जीवन बीमामा नागरिकको आकर्षण निकै बढेको छ । नागरिक बीमाको बारेमा सचेत भएसँगै जीवन बीमा गर्ने क्रम पनि बढ्दो छ । बीमा गर्ने मात्र होइन पोलिसीलाई पनि सयममै नवीकरण गर्ने क्रम झनै मजबुत भएको छ । अझ यस्ता महामारीका बेला त जीवन बीमाको महत्व झनै बढ्ने गरेको छ । जीवनको सुरक्षा र परिवारका सदस्यको सहजताको लागि बीमा गर्नैपर्ने रहेछ भन्ने चेतना निकै बढेको पाएका छौं । हाम्रै कम्पनीले स्थापनाको छोटो समयमा संकलन गरेको प्रिमियमले पनि जीवन बीमामा नागरिकको आकर्षण प्रष्ट हुन्छ ।
नागरिकको आयमा भइरहेको बृद्धिले पनि बीमामा आकर्षण थपेको छ । आम्दानी बढ्ने बित्तिकै मानिसले विभिन्न क्षेत्रमा हात हाल्न खोज्छ । नेपालीको आम्दानी विस्तारै बढ्दै गएसँगै जीवन बीमा गर्नेहरु पनि बढ्दै गएको परिस्थितिले देखाएको छ ।
महामारीसँगै खतरा आउन सक्ने देखेर एकातिर बीमा गर्नेहरु बढ्लान, तर महामारीमा आम्दानीमा आएको गिरावटले बीमा गर्नेहरु घट्नेदेखि लिएर वार्षिक शुल्क तिर्न अप्ठेरो पर्नेसम्मको अवस्था आउने जोखिम कत्तिको छ ?
एकदमै सही कुरा उठाउनुभयो । महामारीले गर्दा नागरिकको आय आर्जन घटेको छ, व्यापार व्यवसाय ठप्प छ, नागरिकले जम्मा गरेर राखेको पैसा दैनिक जीवन चलाउनमै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो अवस्थामा जीवन बीमा गर्नेहरु घट्न सक्ने र वार्षिक शुल्क तिर्न अप्ठेरो हुन पनि सक्छ । महामारी लामो समय रह्यो भने हामीलाई यसले पक्कै चिन्तित बनाउँछ । तर यो कम हुँदै जान्छ या समाप्त नै हुन्छ भन्ने अपेक्षाका साथ नै विश्व चलिरहेको हुनाले अहिले नै आत्तिनुपर्ने छैन । तर खतरा नै छैन भन्ने अवस्था पनि रहेन ।
तपाइँहरु नयाँ कम्पनी भएकाले पनि चुनौतीहरु पक्कै छन् । धेरै पुराना कम्पनी भएको क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ, ग्राहकको लागि अरु भन्दा रिलायन्स इन्स्योरेन्स कम्पनी के आधारमा फरक/राम्रो छ ?
पहिलो कुरा रिलायन्स इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपालीहरुले नै स्थापना गरेका स्थानीय ब्रान्ड हो । संस्थापकहरु स्थायित्व लिएर संस्थालाई भिन्न ढंगले चलाउनुपर्छ भनेर आउनुभएको छ । व्यवस्थापनलाई पनि हामीले भिन्न तरिकाले सञ्चालन गरिरहेका छौं । भिन्नता हामीले हरेक कुरामा ल्याउन खोजिरहेका छौं । हाम्रा स्किमलाई हामीले अरुको भन्दा भिन्न बनाउन खोजिरहेका छौं । बीमा शुल्कमा अझ धेरै प्रतिष्पर्धी हुन खोजिरहेका छौं । बीमाका ग्राहक बनाउने नाममा हुने गलत प्रवृत्तिको अन्त्यको लागि हामीले काम गरिरहेका छौं ।
फरक फरक आम्दानी भएका ग्राहकको लागि फरक फरक स्किम हामीसँग छन् । जबर्जस्ती होइन, नागरिकको मन जितेर र यसका फाइदा बुझाएर बीमा गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । हामी जहिले पनि ग्राहक केन्द्रित भएर सोच्छौं ।
नेपालको पुरै बीमा बजारमा हामी मात्रै यस्तो कम्पनी हौं, जसले चौबीसै घन्टा ग्राहकलाई सेवा दिन सक्छौं, ग्राहक सेवा केन्द्र चौबीसै घन्टा खुला रहन्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको हामीले संस्थागत सुशासनलाई उच्च महत्व दिएका छौं, यो नै एउटा संस्थाको लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा हो ।
जीवन बीमालाई कतै कतै अझै पनि नकारात्मक ढंगले हेर्ने, अभिकर्तालाई विभिन्न लाञ्छना लगाउने क्रम रहेको छ, यसलाई चिर्नको लागि तपाइँहरुको दायित्व के रहन्छ ?
यसमा संस्थाको जिम्मेवारी नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हुन आउँछ । व्यवसायी हिसाबले कारोबार गर्ने हो भने यस्ता लाञ्छना सायद निकै कम आउँछन् होला । प्रतिष्पर्धाको नाममा गैर व्यवसायिक क्रियाकलाप गर्दा नै अरुले भन्ने बाटो पाउँछन् र टिप्पणी पनि हुन्छन् ।
त्यसैले हरेक कम्पनीले व्यवसायिक कारोबार गर्ने, ग्राहक तान्नकै लागि संस्थागत जिम्मेवारी र दायित्व बिर्सने गर्दा समस्या आउन सक्छ । रिलायन्स इन्स्योरेन्स जस्तोसुकै अवस्थामा पनि संस्थागन सुशासन, जिम्मेवारी तथा दायित्वबाट पछि हट्दैन । यसले गर्दा बीमाको स्वस्थ बजार स्थापनामा योगदान पुग्न सक्छ ।
अन्तिम अपडेट: भदौ ९, २०७७
दोलखाकोे च्छो रोल्पा हिमताल भ्रमणमा स्थानीयले नै रोक लगाए
आईपीएल क्रिकेटमा पञ्जाब र राजस्थान खेल्दै
जुवामा ३ हजार हारेपछि आमालाई चिठ्ठी लेखेर १६ वर्षे किशाेर ब...
नवदुर्गाको प्रसाद शीतल निवास पठाइने
देहरादुन घटनाप्रति सरकार गम्भीर छ : परराष्ट्र मन्त्रालय
काठमाण्डाैमा छुरा प्रहारबाट एक जनाकाे ज्यान गयाे
मानार्थ महारथी पदवीकाे इतिहास सच्याउनुपर्ने माग
बुटवलबाट काठमाण्डाै आउँदै गरेकाे जीप धादिङमा दुर्घटना हुँदा...
काठमाण्डाै उपत्यकामा १ हजार ८ सय ८८ सङ्क्रमित थपिए
खुमलटार स्रोत भन्छ, ‘बालुवाटार जाँदैमा त्यस्तो कुनै जादु नै भ...
थप ३ हजार ५१७ जनामा काेराेना सङ्क्रमण, ४ हजार ९६ जना डिस्चार्ज
समय सकिएपछि काम थालियो
बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बोलाइएका ३४ मध्ये ५ खेल...
१०८ वर्षीय बाबुले गराइदिए छोराको चौरासी पूजा
सुनको भाउ तोलामा एक हजार रुपैयाँ घट्यो
कालीगण्डकीको खोंचमा पर्सि शनिबारदेखि बन्जी जम्प सञ्चालन हुने
आईपीएलमा काेलकातासँगकाे खेलमा प्लेअफ समीकरण बिगार्ने दाउमा चेन्नई
प्रदेश २ मा शुक्रबार सार्वजनिक बिदा
‘क्लिन फिड’ मा गैरजिम्मेवार वितरक र मुकदर्शक मन्त्रालय
यसपालि यसरी लगाऔँ दशैँको टीका
भावनामा नबगौँ, यसपटक दशैँसँग सम्झौता गरौँ
कात्तिक ६, २०७७ बिहिबार
यो दशैँमा घर आउन पाइएन
१७ वर्ष अघिको दशैँ सम्झना : यसपालि पनि परदेशमै बित्ने भयो